नश्लिय राजनिति र MNO-DGG - Desh Post
१० आश्विन २०७८, आईतवार ०९:५१ मा प्रकाशित (4 हप्ता अघि) अनुमानित पढ्ने समय : २ मिनेट
देश पाेष्ट /काठमाण्डाैं । कमसे कम Legal Process मा चलेको एउटा पार्टीको रुपमा लिन सकिने पार्टी हो । तर, MNO-DGG अबसर बादीहरुको झुण्ड भन्दा फरक नपर्ला किन भने, यो झुण्ड न कतै दर्ता नै छ न यिनिहरुको राजनिति गर्ने शैली छ ।
नश्लिए राजनिति गर्ने भनेर ब्राम्हणबादको बिरोध गर्छ तर तेहि ब्राम्हण नश्लकी बाहुनी बिना जिउन सक्दैन । आफुहरुलाई यो देशको मंगोल हौँ हामी जंगलको राजा सिंह जस्तो भन्छ । तर, उनिहरुको तर्क भने त्यति सम्मको छैन । गोपाल गुरुङले लेखेको एउटा किताबलाई घोकेर सुगा रटाई उफ्रेर अनि प्रबासमा संगठन बनाउन लगायर उनिहरुबाट महिनावारी रकम उठायर मात्र संगठन चलाउने कहिल्यै मंगोल हितमा काम गर्ला रु अर्को पाटो के छ भने, तर्क संगत बहसको लागि जीवन राई केहि प्रतिशत ठिक छ तर, उसको पनि गलत पाटाहरु भने नभएको होइन ।
साथिहरु एक छाके झोले टेक्ने अखेटो र समात्ने हाँगा बिनाको पत्रुकार सँग युटुबमा फलाकेर मात्र उपलब्ध हासिल हुन्न । गाउँ गाउँ जाउ । हरेक समस्यामा परेकाहरुलाई सहयोग गर, स्कुल कलेजहरुमा ब्राम्हणबादी शिक्षा सगै मातृभाषाको शिक्षा प्रशिक्षण देउ, प्रवासीहरुको भरमा नपर केही आम्दानीको बाटो बनाएर संगठानिक रुपमा ब्यबसाय गर त्यसले आर्थिक सहायता दिन्छ । कयौ उपायहरु छ । तर, यिनिहरु सिर्फ झोले युटुबर संग फलाक्ने, बाहुनलाई शत्रु देख्ने ? यदि कसैलाई खराब छ भन्नु छ भने आफुहरु असल र सफल हुनु पर्छ । आफु कुवामा पसेर अरुलाई धारा किन बनाईस ? भनेर आफु कुवाबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन्न तसर्थ कमि कमजोरी सबमा भए पनि MNO-DGG भन्ने झुण्डमा सुधार गर्न थुप्रै छ ।
अर्को पाटो धर्मको पनि छ MNO-DGG मा लाग्ने ९९% ख्रिष्टियन भनिने नामको इसाईहरु छ । जो नेपालको सच्चा इसाईहरुको लागि घातक हो र यिनिहरु धर्मको नाममा अबसरवादीहरु हुन किन भने, बाइबलले कहिल्यै अर्काको विरुद्धमा कुभलो सोच्दैन । तर, यो झुण्डभित्र सबै जसो अरुको कुरा बिरोध गरि पाप गर्नेहरु छन । तसर्थ यिनिहरुको स्थायी धर्म छैन । सच्चा इसाईहरु यिनिहरुको भर नपर्दा हुन्छ ।
यिनिहरुको नियमहरु मध्य सबै भन्दा मंगोलहरुकै लागि घातक नियमहरु छन । मंगोलहरुले संचालन गरेको व्यापार, ब्यबसायहरुमा मंगोलहरु बाहेक अन्यको समुदायको संलग्नता हुन नहुने । ब्राम्हण नश्लिए ब्यक्तिहरु झुण्डमा प्रवेश निषेध तर मंगोलहरुले ब्राम्हणी पत्नि राख्न मिल्ने । आफ्ना बिरोधी ब्राम्हणहरु सँग लड्न नसक्ने तर, झुण्ड भित्र कै सक्षम ब्यक्तिहरुलाई नौटंकी तमासा देखाएर खुट्टा तान्ने ।आफ्नो झुण्ड सुधार नगरी अरुको समुदायलाई दोष लगाउने । आफु परिश्रमि नहुने । तर परिश्रमीलाई पनि गर्न नदिने । आदि इत्यादि । त्यसकारण MNO-DGG ले सांगठनिक राजनितिको लागि ३० बर्ष अझै अभ्यास गर्नु पर्छ ।
किन हतियार उठाएर जंगल पस्नु पर्छ । यो त झन संभावना छैन । यिनिहरुको शासन सत्ता आउने त सपना मात्र हो । राज्यको शासन सत्तामा पुग्न त चुनाबी प्रक्रियामा जानू पर्यो । चुनाबी प्रक्रियामा जान संगठन दर्ता गर्न पर्यो । दर्ताको लागि समाबेसी र समानुपातिक प्रणालीमा बाहुन क्षेत्रीलाई समाबेस गर्नु पर्यो । होइन भने, प्रसाईँ बाहुनलाई बुझाएको चुनाब चिन्ह सिंहमा गएर पाउ परे हुन्छ ।
अन्तमा सक्छौ राष्ट्रिय संचारमा गयर सत्य र सभ्य बहस गर्ने साहस गर । अन्यथा हिजो खान नपायर कैयौलाई भ्रमको सपना देखायर लुटको खोक्रो पत्रकारिता देखाउने झोले नामधारी पत्रकारको मुकाविला नगरे हुन्छ ।